Dab ka kacay Xabsi lagu xiro Oromada Itoobiya oo Dilay 23 Qof – idalenews.com
Addis(INO)-Ugu yaraan 23 Qof ayaa ku geeriyooday dab ka kacay xabsi mucaaradka lagu xiro oo ku yaala gudaha Itoobiya sida laga soo xigtay war ka soo baxay dowladda maanta oo Talaado ah ,iyadoo Addis Ababa ay wajahayso xaalad kacsanaan ah oo ka dhalatay dibad-baxyo maalmahan ka socday dalkaas.
Dowladda ayaa sheegtay in 21 kamid ah dadkan ay dhinteen ka dib markii ay neefta ku dhagtay dabka awgiis halka laba kale la toogtay ,iyaga oo isku dayaya in ay ka baxsdaan xabsiga ,waxaana dad goob-joogayaal ah ay sheegeen in inta badan dadka dhintay ay ilaalada xabsiga toogteen.
Ilaa iyo hadda lama shaacin magacyada maxaabiista geeriyootay ,waxaan la maqlayaa rasaas mararka qaar ka dhacaysa gudaha xasbiga Qalinto oo ku yaala duleedka magaalada Addis Ababa ,seddex maalin ka dib markii uu dabkan ka qarxay gudaha xabsigaas.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dhimashadan ay timid ka dib markii maxaabiista ay isku dayeen in ay si xoog ah uga baxsadaan xabsiga ,waxaana dadka halkaa lagu xiro lagu hayaa in kabadan seddex sano si maxkamado loo geeyo ,iyaga oo u badan dad loo xiray arimo siyaasadeed.
Hay’adda xuquuqul Insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dad ka badan 400 qof ay dowladdu toogatay tan iyo markii ay bilowdeen dibad-baxyadan ka dhanka ah dowladda ,iyado dadka la laayay ay u badan-yihiin kuwa ka soo jeeda qowmiyadda Oromoda.
Ugu danbayn, xasbiga Qilinto ayaa waxaa ku xiran 300 oo qof oo ay ku jiraan siyaasiyiin iyo waliba wariyayaal siyaabo kala duwan wax uga qoray xaaladda Itoobiya,waxaana lagu soo waramayaa in xaalad nolol xumo oo daran ay xabsigaasi ka jirto.